Mummichi Ministeera Itiyoophiyaa Dabalatee Angawoonni Shan Ragaa Ittisaaf Akka Dhiyaatan Manni Murtii Ajaja Kennee Jira
Hagayya 18, 2017
Galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin kanneen himataman hoogganoota koongiresa federaalawa Oromoo mana-hidhaa Qilinxoo jiran maraaf, manni-murtii federaalaa ol’aanaan, ka Lidetaa jiru, Wixataa darbee jalqabee hanga har’aatti ragaa of irraa ittisaa dhaggeeffataa ture.
Abukaatooleen himatamtootaa, muummicha ministeera Itiyoophiyaa – Obbo Hayile-maariyaam Dessaalenyi dabalee – angawoonni biyyattii ol’aanoon shan akka maammiloota isaaniif ragaa of irraa ittisaa ta’anii dhihaatan mana-murtii gaafatanii jiran.Manni murtiis ajaja kennee jira.
Gama biraatiin immoo, otuu ragaan of irraa ittisaa Obbo Baqqalaa Garbaa dhaggeeffatamaa jiruu, abbaan-alangaa “garaachi na dhukkube nan beela’ee itti fufuu hin danda’u ” jechuun dubbatan. Obbo Baqqalaan kun gorsa aangawootaa argachuuf yeroo barbaacha malee sababaa qubsaa miti jechuun falmaa turan.Manni murtiis itti fufuuf qophii ta’u ibsu iyyu dhuma irratti deemsi mana-murtii sun addaan cite jedhu – Abukaatoolee keessaa tokko – Obbo Abdul-jabbaar Huseen Gammadaa.
Waaree booda garu itti fufee baatii Onkolooleessa bara 2017 tti bellamnii biraa kenname.
Shamarreen Lammii Somaalee Gumii Tokkummaa Mootummootaaf Haasaa Dhageessisuuf Jirti
Hoogganaan Mormitoota Pakistan Daangaan Afgaanistan Waliin Jiru Akka Banamu Gaafatan
Bulchiinsi Traamp Lola Afgaanistaan Ilaalchisuun Tarsiimoo Haaraa Qopheessaan Jira Jedha
Shakkamaan Haleellaa Barseloonaa Tokko To’annaa Jala Oole